Dr. Patrick Kalifungwa oo u dhashay Zambia ayaa aqoon u keenaya Golaha Dalxiiska Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » Dr. Patrick Kalifungwa oo u dhashay Zambia ayaa aqoon u keenaya Golaha Dalxiiska Afrika
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Zambia War Deg Deg Ah
Dr. Zambia Dr. Patrick Kalifungwa oo ka tirsan Jaamacadda Livingstone International University of Excellence Tourism and Business Management, Zambia, wuxuu ka tirsan yahay Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) ee Guddiga Odayaasha.
Xubnaha guddiga cusub waxay ku biirayeen ATB kahor furitaanka jilicsan ee soo socda ee ururka oo dhacaya Isniinta, Nofeembar 5, saacadaha 1400 inta lagu jiro Suuqa Safarka Adduunka ee London.
Riix halkan si loo ogaado wax badan oo ku saabsan shirkii Golaha Dalxiiska Afrika ee 5-tii Nofeembar iyo in la diiwaangeliyo.
200 hogaamiyeyaasha dalxiiska ee ugu sareysa, oo ay ku jiraan wasiiro ka socda wadamo badan oo Afrikaan ah, iyo sidoo kale Dr. Taleb Rifai, xoghayihii hore ee UNWTO, ayaa lagu wadaa inay ka soo qeyb galaan munaasabada WTM.
Sannadkii 1999-kii, Dr. Patrick Kalifungwa wuxuu ku riyooday in maalin uun uu umuli doono jaamacad. Riyadiisa ayaa dib loo dhigay markii loogu yeeray inuu galo siyaasada oo uu noqdo wasiirka dalxiiska, deegaanka iyo kheyraadka dabiiciga ee Jamhuuriyadda Zambia.
Dr. Kalifungwa sannadihii uu wasiirka ahaa wuxuu sii dhiirrigeliyey isaga, ka dib markii uu dhammeystirey shahaadada dhakhtar ee jaamacadda Glamorgan ee Boqortooyada Ingiriiska. Wuxuu ku noqday Zambiya bishii Juunyo 2009, wuxuu furay Jaamacadda Caalamiga ah ee Dalxiiska Sare ee Livingstone iyo Maareynta Ganacsiga (LIUTEBM).
LIUTEBM waxay faa iidooyin badan siisay arday ka kooban 1,000 arday oo farxad iyo mahadnaq ku leh barnaamijyo shahaadooyin kala duwan ah oo ay ka mid yihiin Safarka iyo Dalxiiska, Maareynta Martigelinta, Xisaabaadka, Maareynta Ganacsiga, Isgaarsiinta, Xiriirka Dadweynaha, Maareynta Kheyraadka Aadanaha, Bangiyada iyo Maaliyadda, Sharciga, iyo Caafimaadka. .
LIUTEBM waa jaamacad caalami ah oo la aqoonsan yahay oo loo aqoonsan yahay heer sare labadaba Dahabka Dahabka iyo Platinum Qeybta Caalamiga ah ee Hogaaminta iyo Tayada ee Hagaha Ganacsiga ee Paris, Faransiiska, iyo Ururka Ganacsatada Yurub ee Socrates Award, oo la siiyay Dr. Kalifungwa hoggaamintiisa .
KU SAABSAN GUDDIGA BULSHADA AFRIKA
Waxaa la aasaasay 2018, Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) waa urur caalami ah oo lagu amaano inuu u dhaqaaqo sida mid horseed u noqda horumarinta mas'uuliyadda safarka iyo dalxiiska ku taga iyo ka soo noqoshada gobolka Afrika. Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa ka mid ah Isbahaysiga Caalamiga ah ee Wada-hawlgalayaasha Dalxiiska (ICTP).
Ururku wuxuu siiyaa u doodid iswaafajin, cilmi baaris xeel dheer, iyo dhacdooyin hal abuur leh xubnaheeda.
Iyadoo lala kaashanayo xubnaha shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah, ATB waxay xoojineysaa kobaca joogtada ah, qiimaha, iyo tayada safarka iyo dalxiiska ee, ka imanaya, iyo gudaha Afrika. Ururku wuxuu siiyaa hogaamin iyo latalin shaqsi ahaan iyo wada jir ururada xubinta ka ah. ATB waxay si dhakhso leh u ballaarineysaa fursadaha suuqgeynta, xiriirka dadweynaha, maalgashiga, sumadda, dhiirrigelinta, iyo sameynta suuqyo u gaar ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Golaha Dalxiiska Afrika, riix halkan. Si aad ugu biirto ATB, riix halkan.